श्रीलङ्कामा आतंकवादी हमला : प्रहरीलाई शृङ्खलाबद्ध हमलाबारे पूर्व जानकारी थियो | Ratopati
श्रीलंकामा शृङ्खलाबद्ध विस्फोट
श्रीलङ्कामा आतंकवादी हमला : प्रहरीलाई शृङ्खलाबद्ध हमलाबारे पूर्व जानकारी थियो
आठौँ विस्फोट, मृत्यु हुनेको संख्या १६० पुग्यो, मारिनेमा विदेशी नागरिक पनि
personएजेन्सी exploreश्रीलंका access_timeबैशाख ८, २०७६ chat_bubble_outline2
श्रीलंकाको चर्च र होटलहरुमा आइतबार भएका आठ शृङ्खलाबद्ध विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या १६० पुगेको छ । यसमा दर्जनौँ विदेशी नागरिक पनि परेका छन् ।
१० वर्षअघि गृहयुद्ध समाप्त भएपछिको सबैभन्दा ठूलो हिंसात्मक घटनाको भत्सर्ना गर्दै प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले यसलाई कायरताको संज्ञा दिएका छन् । उनले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको पनि बताएका छन् ।
आइतबार बिहान लगातार ६ वटा शृङ्खलाबद्ध विस्फोट भएका थिए भने त्यसको दुई घण्टापछि थप दुई विस्फोट भएका थिए । यसले राजधानी कोलम्बोको चर्चित सेन्ट एन्थोनी श्राइनमा पनि क्षति पुगेको थियो ।
डेली मेलका अनुसार श्रीलंकामा भएको शृङ्खलाबद्ध हमलामा कम्तिमा ३५ जना विदेशी नागरिक मारिएका छन् । अस्पताल स्रोतका अनुसार मारिने विदेशी नागरिकमा बेलायती, डच, पोर्चुगिज र अमेरिकी नागरिक रहेका छन् । घटनामा जापानी नागरिक पनि घाइते भएको बताइएको छ ।
घटनापछि सेन्ट एन्थोनीमा पुगेका एएफपीका फोटोपत्रकारले भुइँमा यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा देखेको जानकारी दिएका छन् ।
चर्चको छत नै बम विस्फोटमा क्षतिग्रस्त बनेको थियो भने भुइँमा जमेको रगतको तालमा छतको टाइल्स र काठका टुक्राहरु तैरिहरेका थिए ।
घाइतेहरुलाई तत्कालै निजिकैको अस्पतालमा लगिएको थियो ।
प्रहरी प्रमुखको चेतावनी
विस्फोटबारे कसैले जिम्मा लिएको छैन र विस्फोटको प्रकृतिबारे कुनै जानकारी आएको छैन ।
तर, एएफीका अनुसार श्रीलंका प्रहरीका प्रमुख पुजुथ जयासुन्दराले आफ्ना शीर्ष अधिकारीहरुलाई १० दिन अघि ‘चर्चित चर्च’ हरुमा आत्मघाती बम आक्रमण हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
‘एउटा विदेशी गुप्तचर एजेन्सीले एनटीजे (नेसनल थोउविथ जमाथ) ले चर्च तथा कोलोम्बोस्थित भारतको हाइकमिसनमा आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहेका छन्,’ चेतावनी सन्देशमा भनिएको थियो ।
एनटीजे श्रीलंकको कट्टरपन्थी मुस्लिम समूह हो । गत वर्ष बुद्धका मुर्तीमा भएको तोडफोडमा यही समूहको हात रहेको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयले आइतबार साँझ ६ बजेपछि कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ भने केही समयका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धित गरिएको थियो ।
आइतबार पहिलो विस्फोट कोलम्बोको सेन्ट एन्थोनी चर्चमा भएको थियो भने दोस्रो विस्फोट त्यहाँबाट उत्तरमा रहेको नेगोम्बोस्थित सेन्ट सबास्टियन चर्चमा भएको थियो ।
लगत्तै प्रहरीले पूर्व तटमा रहेको बाटिकालोवास्थित अर्को चर्चका साथै कोलम्बोस्थित तीन लक्जरी होटलमा विस्फोट भएको जानकारी दिएको थियो ।
साँझ कोलोम्बोको दक्षिणमा रहेको अर्को होटलमा विस्फोट भएको थियो जसमा थप दुई जनाको ज्यान गएको थियो । त्यस्तै, अर्को विस्फोट कोलम्बोको उत्तरमा रहेको ओरुगोदावात्तामा भएको थियो ।
निशाना बनाइएका होटलहरु श्रीलंकामा पर्यटकहरुका लागि चर्चित मानिने होटलहरु रहेका छन् । जसमा प्रधानमन्त्री निवास नजिकै रहेको सिनामोन ग्रान्ड पनि रहेको छ ।
एक अधिकारीका अनुसार होटलको रेस्टुरेन्टमा विस्फोट भएको थियो ।
त्यस्तै, सांग्रिला होटलमा पनि विस्फोटबाट ठूलो क्षति भएको छ ।
कोलोम्बोमा रहेका राजदूतावासहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई सुरक्षित स्थानमा रहन आग्रह गरेको थियो भने श्रीलंका एयरलाइन्सले यात्रुहरुलाई सुरक्षा जाँचका कारण चार घण्टाअघि विमानस्थल आउन आग्रह गरेको थियो ।
श्रीलंकामा बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको बाहुल्यता रहेको छ भने मात्र ६ प्रतिशत ईसाई धर्मावलम्बी रहेका छन् ।
गत जनवरीमा प्रहरीले जंगलबाट ठूलो मात्रामा विस्फोटक पदार्थसहित कट्टरपन्थी मुस्लिम समूहका चार जना सदस्यहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।
April 21, 2019, 10:30 p.m. Saroj basnet
Namaro ho yo ta ne
April 21, 2019, 8:07 p.m. Bipin Karmacharya
निर्दोष​ नाग​रिकह​रु माथी ज्यान जाने ग​रि ग​रिएको ह​म​ला घोर मान​व​ता बिरोधी कार्य​ हो । य​स​मा स​म्ल​ग्न​ कसैलाई प​नी छोड्नु हुदैन​।
उत्तर कोरियामा स्थानीय निर्वाचनका लागि मतदान, ९९.९८ प्रतिशत मतदाता सहभागि
श्रीमतीको मर्जीबिना बेडरुममा सिसिटिभी क्यामरा, सासुले २४ घण्टा निगरानी गर्ने
बेलायती तेल ट्याङ्करका चालक दलका सदस्य सुरक्षित र स्वस्थ: इरान
पाकिस्तानमा महिलाद्वारा आत्मघाती आक्रमण, सात जनाको मृत्यु
पोखराका बसमा इ–टिकेटिङ खोइ ?
होटलमा अनैतिक सम्बन्ध राख्ने १० जना पक्राउ
भारतीय दूतावासमा पम्फा भुसालदेखि नविना लामासम्मलाई राखेर गोप्य बैठक
अछामका २ वडा नेपालमै पहिलो पोषणमैत्री वडा घोषणा
कम्युनिष्टको राष्ट्रवादी नारामा देशभक्ति छैन: पौडेल
पुरानो गाडी परिवर्तन गर्ने हो ? विद्युतीय एसयूभी एमजी जेडएसको प्रिबुकिङ शुरु
एनएमबि बैंकद्वारा नयाँ कर्पोरेट अभियान आरम्भ
मंगलबार बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालयको बैठक स्थगित
यस्तो छ ओपोको पट्याउन मिल्ने फोन